Banxusa uZikalala ukuthi asebenze
USIHLALO we-ANC KwaZulu-Natal ophakanyiswe yisigungu se-ANC ukuthi abe nguNdunankulu wesifundazwe. Isithombe: Sibonelo Ngcobo African News Agency (ana)
MHLENGI SHANGASE | May 15, 2019
AMAQEMBU ahlukene ezepolitiki KwaZulu-Natal asenxuse uMnuz Sihle Zikalala, ophakanyiswe yisigungu sikazwelonke se-ANC kwesikaNdunankulu ukuthi agxile ekulungiseni ezemfundo, ezempilo, akhe amathuba emisebenzi, aphinde alungise eyomasipala abangasebenzi abathola imibiko engemihle yezimali.
I-ANC iphakamise uZikalala kwesikaNdunankulu wesifundazwe kade imemezela oNdunankulu bezifundazwe eziyisikhombisa, kwasala iNorth West okusenezingxoxo ngomuntu ozongena kulesi sikhundla.
UNobhala-jikelele we-IFP, uMnuz Velenkosini Hlabisa, uthe bafuna alungise indaba yezindlu, ukukhulisa umnotho, alungise nenkinga esezibhedlela.
Uthe nendaba yezemfundo iyinkinga edinga ukulungiswa njengoba kuminyene emakilasini othisha bengaqashiwe.
“Uma engagxila kulezi zinto isifundazwe sizothuthuka. Izikhala azivalwa uma kuhambe abantu kuhulumeni, kugcina kungaqashwa bese izidingo zingafinyeleli kubantu.”
UMnuz Zwakele Mncwango weDA esifundazweni, uthe bazomnika ithuba lokuthi asebenze baphinde basebenzisane naye kodwa bazomqapha ngeso lokhozi.
Uthe kumele enze izinguquko eminyangweni eminingi njengaseMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana lapho kumele axoshe uNgqongqoshe walo mnyango, uNkk Nomusa Dube-Ncube.
Uthe kumele afake umuntu ozobhekela omasipala ngendlela njengoba bengenzi kahle, behlale bethola imibiko engemihle yezimali.
“Akulungiswe kwezempilo kuliwe nenkohlakalo khona ehhovisi likaNdunankulu. Kumele asebenzisane namanye amaqembu, ehlise ukuzithwala ngoba uSihle uzithwele,” kusho uMncwango.
IKwaZulu-Natal chapter of the Progressive Professionals Forum (KZN-PPF) ikwamukele ukuphakanysiwa kukaZikalala kwesikaNdunankulu.
Ibamba likasihlalo wale nhlangano, uDkt Sandile Tshabalala, lithe i-ANC ayilenzanga iphutha ngokuphakamisa uZikalala lathi bayamethemba ukuthi uzoguqula impilo yabantu besifundazwe. “Usemncane, ukwazile ukuveza ukuthi umqondo wakhe usabalele, uletha ithemba esifundazweni ikakhulu kubantu abasha. Uyayiqonda inselelelo ebhekene nabantu besifundazwe okubalwa indlala, ukungasebenzi nokungalingani.”
UZikalala ozofungiswa ngasekupheleni kwale nyanga, uzalelwe eNdwedwe ngo-1973, wajoyina umzabalazo ena-15 weminyaka. Uke waba ngunobhala wophiko lwentsha lwe-ANC esifundazweni, waba yiphini likanobhala, waphinde waba ngunobhala njengoba engusihlalo we-ANC.
Ungungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho, ezemvelo nezokuvakasha, aphinde abe ngumholi wamabhizinisi kahulumeni.
Uneziqu zeBA kwiCommunication Science zase-UNISA, eze-Honours kwiPublic Administration zaseNyuvesi yaKwaZulu-Natal.
Ushadelwe nguNeli Zikalala, banezingane ezintathu.
Khonamanjalo uphiko lwabesifazane lwe-ANC lugxekile ukuphakanyiswa kwabantu besifazane ababili kuphela kwezobundunankulu.
E-Eastern Cape kuphakanyiswe uMnuz Oscar Mabuyane, eFree State uNkk Sisi Ntombela, eGauteng kubuyela uMnuz David Makhura, eLimpopo kubuyela uMnuz Stan Mathabatha, eMpumalanga kubuyela uNkk Refilwe Mtsweni, eNorthern Cape kuphakanyiswe uMnuz Zamani Saul.
I-ANC ithe oSomlomo bezishayamthetho kuzoba ngabesifazane noma kungathiwa oNdunankulu abantu besifazane ukuze kube nokulingana kwezobulili.
UNksz Ntombi Mekgwe, wophiko lwabesifazane lukaKhongolose, uthe uthemba ukuthi ikhabhinethi kaMengameli Cyril Ramaphosa izoba nokulingana ngokobulili.
Uthe badumele ukuthi kuphakanyiswe abesifazane ababili kuphela kwezobuNdunankulu wathi bazoqhubeka baxoxe ne-ANC ngalokhu.